पाल्पामा पहिरोले गर्भवतीको मृत्यु, पाँच जना बेपत्ता लाखौं क्षति - MONGOL KHABAR
पाल्पामा पहिरोले गर्भवतीको मृत्यु, पाँच जना बेपत्ता लाखौं क्षति
टोपबहादुर कामु मगर
पाल्पा । असोज ८ बिहिवार, पाल्पामा अबिरल वर्षाले घर भत्किदा च्यापिएर एक गर्भवती महिलाको ज्यान गएको छ । रम्भा गाउँपालिका वडा नं. २ स्थित सुरुङ्डाँडाका मोतिसरा गाहाको ज्यान गएको हो ।
वर्षातले बुधबार राति घर भत्किदा उनको घरले च्यापिएर मृत्यु भएको रम्भा गाउँपालिका वडा नं. १ का अध्यक्ष एवं गाउँपाािलकाका प्रवक्ता कृष्णप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिनुभयो । मृतक मोतिसरा गर्भवती समेत रहेको उनको भनाई छ । पहिरोले च्यापिएको उनको शब निकालिएको छ । सोही स्थानकै १४ वर्षकी अन्जु पुन घाइते भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
उता रम्भाकै गहिराटोलमा गएको पहिरोले दुई घर च्यापिदा पाँच जना बेपत्ता भएका छन् । स्थानीय हुमबहादुर गाहाको घरमा सुतिरहेका पाँच जना पहिलोमा परी बेपत्ता भएको प्रहरीले जनाएको छ । पहिरोमा परी बेपत्ता हुनेमा हुमबहादुर सहित उहाँको श्रीमती, दुई नातिनी र छोरी रहेको वडा अध्यक्ष उमानसिंह सारु मगरले जानकारी दिनुभयो । उनीहरुको खोजी र उद्दार कार्य चलिरहेको बताइएको छ ।
पाल्पा कै रैनादेवी छहरा गाउँपालिका वडा नं. २, सोमादी बासखर्कका बेलबहादुर श्रेष्ठको कुखुरा फर्ममा पहिरो जाँदा ७५ वटा बोइलर कुखुरा मरेको छ । उहाँको दुई लाख रुपियाँ बराबरको क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पाल्पाकै बगनासकाली गाउँपालिका ४, तिखुमका रुकबहादुर चर्तीको कच्ची गोठ भत्किदा २ वटा भैँसी र ३ वटा बाख्रा मरेको छ । यस्तै रामपुर नगरपालिका वडा नं. १ हागेपीपलका प्रेमबहादुर सार्कीको गोठ पहिरोले बगाउँदा १ वटा बाख्राको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अबिरल वर्षाका कारण तिनाउ गाउँपालिका वडा नं. ६ कोषका चित्रबहादर रावलको गोठ पहिरोले बगाउँदा ४ वटा बाख्राको मृत्यु भएको छ भने माथागढी गाउँपालिका वडा नं. ४ केरौलीस्थित चित्रेछाँप प्राविको चार कोठे भवनमा पहिरोले क्षति पुर्याएको छ । केरौलीका हुमबहादुर सारुको गोठ समेत पहिरोले बगाउँदा ४ वटा बाख्राको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अबिरल वर्षाले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा क्षति पुर्याएको छ । थप विवरण आउन बाँकी भएको प्रहरीले जानकारी दिनएको छ ।